IZITAYILE EZIMFUTSHANE EZINGAMA-60 ZAMADODA EZINENWELE EZINCIPHILEYO - UKUSIKWA OKUHLE - UHLOBO
Izitayile ezimfutshane ezingama-60 zaMadoda ezinenwele eziNciphileyo - Ukusikwa okuhle
Ngaba unwele olucolekileyo olunengxaki ukuyenza mbuna? Rhweba ngoxinzelelo lwakho kwezi ndlela zimfutshane. Inyaniso kukuba, ukhetho lwakho alukhawulelwanga ngumlo wakho kunye nofuzo losapho.
Kutheni uphupha ngokuba nentloko engqindilili nentloko xa izitayile ezintle sele zilindelwe.
umnyango epokothweni ngeglasi
Mhlawumbi uvile ngelizwi lakudala elithi, Ingca ihlala iluhlaza kwelinye icala locingo.
Xa kuziwa kwiinwele ezishinyeneyo kunesiqhelo isiqalekiso ngamanye amaxesha sikholelwa okanye hayi. Amadoda azelwe nayo ajongana ne-manes efuna ukuphazanyiswa kusasa ukuze ufumane ulawulo olululo. Ukubumba kunye nokuloba kuza nemiceli mingeni kunye nemicelimngeni emininzi kwiimveliso zokuzilungisa nazo.
Ngandlel 'ithile, ukuba neenwele ezingcakacileyo kuyintsikelelo ngenxa yokuba ziba bhetyebhetye kwaye zikhaphukhaphu. Zihambile iintsuku apho amanene kwafuneka ahlalise ngokusikwa kwendabuko ukusombulula iingxaki zabo. Uyakwazi ukuba ndithetha ukuthini apha kumzuzwana…
Ukukunceda ugqithise imiqobo eza nofuzo losapho lwakho, ndibeke ingqokelela yeenwele ezimashumi amathandathu ezibalaseleyo zeenwele ezimfutshane zamadoda aneenwele ezincinci apha ngezantsi. Inkangeleko enye kwaye uyakufumana umbono ongcono wendlela amanene asebenzisa ngayo iinwele ezintle ukuba zizuze.
Eyona nto ilunge kakhulu, ukusika ubude obufutshane kufuna imveliso encinci yokuzilolonga ukuze uyifumane. Oko kuthetha ukuba unokubonakala umhle ngaphandle kokukhathazeka malunga nawuphi na umonakalo wokhathalelo lweenwele. Ewe kunjalo, isitayile sabo esilula kakhulu esenza ukuba ubomi bube lula ngokulula kusasa.
ngaphandle kwenkampu yendlela kunye negumbi lokuhlambela
Igama lomvambo engalweni ephezulu
iinwele ezimfutshane zamadoda zokucheba iinwele
ukuhamba kweepryry zangoku